Free Dating App & Flirt Chat - Match with Singles 1.1119 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.1119 လြန္ခဲ့ေသာ 14 မိနစ္က
Application မ်ား ခ်ိန္းေတြ႕ျခင္း Free Dating App & Flirt Chat - Match with Singles
Free Dating App & Flirt Chat - Match with Singles ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင်ကတခြားလူချိန်းတွေ့ကြနှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာတစ်ဦးအေးမြ chatting ပလက်ဖောင်းရှာနေ? အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုရန်မလိုဘဲချက်ချင်းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်မှတ်ပုံတင်ရန်ချင်ပါတယ်? သင်နှင့်အတူ, ယနေ့အထိတစ်စုံတစ်ယောက်ကရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေအခြားဆိုရင် single တန်ချိန်နှင့်ချိတ်ဆက်ပရောသို့မဟုတ် chat ဖို့ကိုချစ်ချင်ပါတယ်? ထိုအခါဒီချိန်းတွေ့ချက်တင်သင်လိုအပ်အတိအကျအရာဖြစ်တယ်။ app ကိုတချို့ကအားသာချက်များ:
- မှတ်ပုံတင် (မပင်အီးမေးလိပ်စာတစ်ခုလိုအပ်ပါသည်) အခမဲ့
- hidden In-app ကိုဝယ်ယူသို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်မရှိ
- app ကိုအပေါငျးတို့သ features တွေကိုချက်ချင်းနှင့်၎င်းတို့၏အပြည့်အဝအတိုင်းအတာအထိသုံးနိုင်တယ်
- အခြားဆိုရင် single မှသင်၏အကွာအဝေးကီလိုမီတာမှာပြသသည်
ယုံကြည်စိတ်ချ? ထိုအခါလက်ျာယခုစစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ခုသို့မဟုတ်ပရောပရှာပြီးတစ်ဦးပျြောရှငျဘဝဆီသို့ဦးတည်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းယူပါ။ နယူးဆိုရင် single ပဲသင်ကဲ့သို့မိမိတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပျြောရှငျမှုရှာဖှနေ့တိုင်း join ။ ဒါကြောင့်မည်သည့်ကြာကြာမစောင့်ကြဘူးနှင့်ယခုသင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ချိန်းတွေ့ app ကို download လုပ်ပါ။ ထိုခဏပရောပရည်နှင့် chatting စတင်! တာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့!
Free Dating App & Flirt Chat - Match with Singles အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Free Dating App & Flirt Chat - Match with Singles အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Free Dating App & Flirt Chat - Match with Singles အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Free Dating App & Flirt Chat - Match with Singles အား အခ်က္ျပပါ
split-store စတိုး 39 65.17k
Free Dating App & Flirt Chat - Match with Singles ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
inLove (InMessage): Chat & Meet, Your Dating App❤️
ေနာက္ထပ္ ခ်ိန္းေတြ႕ျခင္း အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း Free Dating App & Flirt Chat - Match with Singles အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.1119
ထုတ်လုပ်သူ Flirt and Dating Apps
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.iubenda.com/privacy-policy/59591443
App Name: Free Dating App & Flirt Chat - Match with Singles
Release date: 2019-10-15 19:12:59
လက်မှတ် SHA1: 80:C6:7D:B1:78:6F:21:32:4F:06:F1:18:B0:03:4A:D1:11:A4:5E:03
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Dating
Free Dating App & Flirt Chat - Match with Singles APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ